Shirka Musasada EMA ee 5aad oo ka socda magaalada Örebro ee dalka Sweden (Masawiro)
January 3, 2019 - Written by Editor
Örebro:-Waxaa saaka ka furmay magaalada Örebro ee dalka Sweden Shirka Musasat EMA (European Muslim Association) kulankeedii 5aad waxaan ka soo qeyb galay wufuud culumo iyo ducaad ah kuwaas oo ka kala yimid wadamada Norway ,Sweden ,Finland iyo Denmark .
Kulanka waxaa furay ku xigeenka Gudoomiyaha Musasat EMA Sh C/risaaq Suggle Maxamed waxaana uu furay shirka isaga oo ku soo dhaweeyey kalimada kooban oo wacdi ah uu jeediyey Fadiilat Sh C/raxmaan Abyad Xafidahulaah.
Sh C/raxmaan Abyad Xafidahulaah ayaa kalimad kooban ka jeedshay Shirka Musasat EMA (European Muslim Association) wuxuuna kula dardaarmay dhamaan wufuud ka soo qeyb gashay kulanka alle ka cabsi iyo in la dardar galiyo dacwada .
Sheekh C/raxmaan Abyad Xafidahulaah ayaa soo koobay ahmiyada faafinta Dacwada iyo gudashada waajibaadka saaran ducaada iyo diinta islaamka la gaarsiiyo xitaa dadka ku dhaqan wadamada aan ku dhaqnahay .
Intaas ka dib ayaa waxaa loo gudbay warbixin laga dhageystay wufuuda ka kala timid wadamada Denmark, Sweden,Finland,iyo Norway waxayna ka warbixiyeen dacwada ka socota maraakista ku taal wadamada kor ku xusan .
Shirka ayaa si habsami leh u socda waxaa idiin soo gudbin doona wixii ka soo kordha inshalaah.